कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं महानगरमा कहाँ कति संक्रमित ? – Sulsule
कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं महानगरमा कहाँ कति संक्रमित ?
सुलसुले २०७७ भदौ २३ गते १५:४० मा प्रकाशित
पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको छ । उपत्यकाका अरु जिल्ला भन्दा काठमाडौंमा संक्रमणको भयावह नै भएको छ । काठमाडौं जिल्लाभित्रमा पनि काठमाडौं महानगरपालिका त कोरोना संक्रमणको केन्द्रविन्दु नै बनेको छ ।
अहिले सम्म महानगरभित्र मात्रै ३ हजार ७ सय ३७ जना कोरोना संक्रमित रहेका छन् । २७ जनाको यही महानगरपापलकाभित्र मृत्यु भएको छ भने ९६० जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरुलाई घरैको आइसोलेसनमा बस्न भनेको छ । परिक्षणको दायरा अझै जति बढाउन पर्ने हो सरकारले बढाउन सकेको छैन । अझै परिक्षणको दायरा बढाउदै जाने हो भने काठमाडौंमा झन डामाडोेलको अवस्था हुने संकेत देखिन्छ । अहिले सम्म काठमाडौं महानगरभित्र कुन वडाको कुन ठाउँमा कति संक्रमित रहेका छन् त्यसको प्राप्त तथ्याङ्क तल दिइएको छ ;-